ဦးရွှေမန်းသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနီးကပ် လူများမှ သတိပေးစာ ~ Myanmar Express
ဦးရွှေမန်းသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနီးကပ် လူများမှ သတိပေးစာ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌကြီး ဦးရွှေမန်းခင်ဗျား... ကျွန်ုပ်တို့၏ လူထုမိခင် အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နိုင်ငံပေါင်းစုံမှာ အစည်းအဝေးမျိုးစုံ၊ ဟောပြောပွဲမျိုးစုံ၊ လွှတ်တော်မျိုးစုံ တက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပွဲတိုင်းမှာလည်း ရှေ့ဆုံးတန်းမှ သော်လည်းကောင်း၊ စင်မြင့်ထက်မှသော်လည်းကောင်း နေခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဦးရွှေမန်း ရဲ့လွှတ်တော်ထဲရောက်မှ နောက်ဆုံးတန်းမှာ ထိုင်နေရပြီး ဘေးဘယ်ညာမှာ ယောင်္ကျားသားတွေနဲ့မို့ အကြပ်အတည်းဖြစ်နေရပါတယ်။ အသက် ၇၀ ပြည့်ခါနီး ပေမယ့် မျက်စိအလွန်အားကောင်းတဲ့ အမေစု ဟာ ဘယ်တုန်းကမှ မျက်မှန်မတပ်ခဲ့ဖူးရပဲ ဦးရွှေမန်းရဲ့ လွှတ်တော်နောက်ဆုံးတန်းမှာ ထိုင်ရတော့မှပဲ ရှေ့ဆုံးကို ဘာမှမမြင်ရတော့လို့ မျက်မှန်တပ်ထားရပါတယ်။ ယခုရက်ပိုင်းတွင် ထွက်လာသော သတင်းအချို့မှာ ၁ နှစ် မှာ ၈ လ လွှတ်တော်ခေါ်မယ်လို့ ဖတ်ရှုရပါတယ်။ ၁ နှစ် မှာ ၈ လ လုံး လွှတ်တော် နောက်ဆုံးတန်းမှာ ထိုင်ပြီး ရှေ့ကို မှုန်ဝါးဝါး ဆက်ကြည့်ရပါကာ အမေစု ရဲ့ မျက်စိအခြေအနေ မှာ စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တကမ္ဘာလုံးက သာမန်လူတစ်ယောက်ထက် ပိုသော စံနှုံးဖြင့် တိုင်းတာထားပါသဖြင့် ဦးရွှေမန်းတို့ကလည်း သာမန် တိုင်းရင်းသား အညတြ လွှတ်တော် အမတ်တွေနဲ့ တန်းတူ ထိုင်ခိုင်းခြင်း၊ တန်းတူ ထမင်းစားခိုင်းခြင်း၊ တန်းတူ ရိပ်သာမှာ တည်းခိုခိုင်းခြင်း မပြုပါရန် သတိပေးလိုက်ပါသည်။Myanmar Express
သာမန်ထက်ထူးချင်ရင် နဖူး -------- အင်း.....?????
ဘယ်နေရာမှာထိုင်ချင် လို့လဲ သရဲကြောက်လို့လား မျက်စိမကောင်းရင် American Vision ရှိတယ်
တသက်လုံးယောင်္ကျားတွေနဲ့ ပလူးပလဲနေလာပြီးမှ အခုမှလာရှက်ပြမနေနဲ့ဒီရွတ်တွနေတဲ့ အဖွားကြီးကို ဘယ်သူမှစိတ်မ၀င်စားဘူး
ဦးရွေမန်းခင်ဗျာ ဘင်္ဂလီတွေကိုချစ်တဲ့ အမေစုကို ဘူးသီးတောင်လွတ်တော်အမတ်နှင့်မောင်တောလွတ်တော်အမတ်ကြားမှာ ကျေဇူးပြုပြီး ထိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ ကုလားအနံ့မရင် ခေါင်မုန်းလိမယ်
11 July 2012 14:05
တကမ္ဘာလုံးက ဘာတိုင်းတိုင်း အမတ်ကအမတ်ပဲ လေ...ဘယ်နေရာမှာထိုင်ချင် လို့လဲ...
11 July 2012 17:08
နောက်မှာထိုင်ရလို့ ဖိးငုတ်ရင်. .............စုတ်လိုက်ပါလား
သနားလို. နောက်ဆုံးတန်းမှာပေးတာတောင် မထိုင်ချင်ဘူးလား မထိုင်ချင်ရင်ပြန်ထွက်သွားပေါ့
12 July 2012 01:42
12 July 2012 20:21
13 July 2012 09:52
သူများထက်ထူးပြီး နဖူး အင်း ဟိုဒင်းပေါက်ချင်တယ် အောင်ဆန်းစုကြည်ကရော လွတ်တော်အမတ်မဟုတ်လား ကျန်တဲ့သူတွေကရော တောက် ဗိုလ်ချုပ်မျက်နှာနဲ့ကြည့်နေတာကိုရောင့်တက်နေတယ်
ငါတို့ကပြည်သူတွေပါလွှတ်တော်ထဲတော့ရောက်ပြီနေရာထိုင်ခင်းကအလုပ်လုပ်မှာလားလူကအလုပ်လုပ်တာလားစဉ်းစားအုံး ချီးဘရိန်းတွေပြောလို့ရတိုင်းလျှောက်ပြောမနေနဲ့လူလိုစဉ်းစား လူဆိုရင်ပေါ့
10 August 2012 01:06
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေပြီး သူ့ပထွေးဘာသာနဲ့လာပြီးပါတီလာထောင်နေတာကမဟုတ်တော့ဘူး ဘာ NLD ပါတီလဲ ထွက်သွားပါ ကွာ NLD ပါတီ မင်းတို့ပထွေး အင်္ဂလိပ်တွေကို သွားပြီးရေသာဆေးပေးလိုက်ပါကွာ ----------- NLD အပေါင်းတို့ရေ
[image: Photo: --လူထုကျန်းမာရေး(ကင်ဆာရောဂါ ကာကွယ် နိုင်အောင် ဂေါ်ဖီထုပ် စားပါ )- Monday, May 20, 2013 ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ပန်းဂေါ်ဖီနဲ့ ဘရိုကိုလီ (အစိမ်းရောင် ပန်းဂေါ်...